Ngaba Indlela ilungisa emehlweni kaThixo? — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Njani na singamalungisa emehlweni kaThixo? Oku ngokuqinisekileyo kwi intlonipho efanayo apho uKristu obengumoni. Kuba ecinga ngendlela indawo yethu, ukuze ube mthetho kwigumbi lethu, kwaye ukuze kujonganwe nazo njengoko ngokomoni, hayi ngenxa yeziphoso zakhe, kodwa abo zabanye, njengokuba yena enyulu kwaye baxolelwe zonke isiphoso, kwaye ukuze banyamezele isohlwayo ityala kuthi- ukuba yena. Ke ngendlela efanayo, inene, ukuba ngoku amalungisa sikuye- kungabi ngokumalunga saneliseke yethu endisenzela ubulungisa bukaThixo ngenxa yethu kwimisebenzi, kodwa ngenxa yokuba ndincinwe ngokunxulumene ngobulungisa bukaKristu, apho kuthe kwambatha ngokholo, ukuze ibe yeyethu.
Funda oku ngokucotha makube Nditshonile! Ndiye ndabona esi sicatshulwa xa nilungiselela umyalezo wam 2 Korinte 5:18-21 kuba Outreach Conference National Campus. Izinto ezintle
Mary Gayle • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:09 mna • impendulo